कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ ? अब तपाईले पाउनुहुनेछ यी ८ फरक | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल तामाङ घेदुङ, कुवेत द्वारा धन्यबाद ज्ञापनको विज्ञप्ति जारी
कांग्रेस संस्थापनको नेता रामचन्द्र, कृष्ण सिटौलाले चुनौती दिने →
६ फागुन, काठमाडौं । देशका विभिन्न शहरमा कोयिरन भाषाका कक्षा सुरु भइरहेका छन् । सन् २०१७ का लागि आउँदो असारमा परीक्षाको आवेदन माग हुँदैछ भने भदौमा परीक्षा हुनेछ ।
३.बढ्दैछ कामदार कोटा
६. नेपाली भाषामै परामर्श
यसमार्फत कामदारले आफ्नो हकहित, सेवा सुविधा र काम कर्तब्य तथा अधिकार’bout जानकारी लिन सक्छन् । यो सुविधा यसअघि जानेहरुलाई थिएन ।
कोरियामा कार्यरत धेरै कामदारले अहिले हुण्डीलगायत विभिन्न अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर रकम पठाउने गरेका छन् । यसअघि जानेहरुले रेमिट्यान्स बैंकिङ सुविधा’bout जानकारी नलिएकाले यो समस्या ब्याप्त भएको सरकारको ठहर छ । त्यसैले यो वर्षदेखि कोरिया शाखाले बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स कारोबार’bout छुट्टै अभिमुखीकरण लिन सुरु गर्दैछ ।
पूर्णतः कुनै देशमा कार्यरत नेपालीको आˆनै लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनालाई नमूनाका रुपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।(अन्लाईनखबर )